ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ခပ်လှလှ ဂျပန်မလေးကို အဖုတ်လျပ် အလိုးကောင်းတဲ့ ဘဲတစ်ပွေနဲ့ ပေးလိုးထားတာဗျာ။ ကိုယ်စော် ကိုယ်ကို စွဲနေစေအောင် ဘယ်လိုမျိုး ကာမဆက်ဆံမှု့ ပြုရမယ်ဆိုတာ ဒီကားလေးက မီးမှောင်းထိုး ပြသပါလိမ့်မယ်။ များသောအားဖြစ် မိန်းမတွေက ယောကျာင်္းတွေထပ်ကို ကာမစိတ် ကြာတတ်ပါတယ် အများစုက နားမလည်းဘဲ တက်လိုးပြီးရင်ပြီးရော ကိုယ်ပြီးတာနဲ့ ပြီးပြီထင်ကြပါတယ် အမှန်က အဲ့လိုမျိုးက မိန်းမကို ဆွပေးသလောက်သာရှိပါတယ်။ စော်ကို ကာမအထွတ်အထိတ်ရောက်အောင် လိုးဖို့ ဆိုတာကတော့ မလိုးခင် ကောင်းကောင်းကြီး ဆွကို ဆွပေးရမှာ တာဝန်တစ်ခုပါ။ ဆွနည်းလေးတွေ မသိသူများ ဒီကားက ဂျပန်ဘဲကြီး တစ်ဆင့်ချင်းစီ အပေါ်ကနေ အောက်ကို ဆွပြသွားမယ် ပညာယူလိုက်ပေါ့။ ကောင်းကောင်းသာ အဆွခံလိုက်ရတဲ့ မိန်းမက ကာမဆက်ဆံရာမှာ ပိုပြီး အထွတ်အထိတ် ရောက်စေပါတယ်။ အဖုတ်လျပ်ခန်း အဖုတ်ကလိခန်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှု့စားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စော်လေးရဲ့ လီးစုပ်ခန်း ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလဲ ကြည့်ရပါမယ်။ ကောင်းကောင်းကြီး အဖုတ်လျပ်ခံထားရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဖုတ်ထဲ လီးဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကောင်းပြီးရင်း ကောင်းဖို့သာ ရှိတော့တာပေါ့။ ကြည့်ကြည့်လိုက် စော်ကို အကောင်းကြီး ကောင်းအောင် ဘယ်လိုဆွပြီး လိုးပေးသင့်တယ်ဆိုတာ အကြည်လင်ဆုံး HD ဗီဒီယိုရိုက်ချက်နဲ့ ကြည့်ရပါမယ်။
Labels: ကြည့်သင့်တဲအပြာကားများ, ဂျပန်, အပြာကားတို, အပြာကားရှည်, အာရှ
ဂျပန် Top ten Pornstar တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Yui Hatano ရဲ့ဒီနေ့ထွက်ကားသစ်လေးပါ။
မြန်မာကားဆိုတော့အညွှန်းတွေဘာတွေရေးမနေတော့ပါဘူး ဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်ကြနော် !
Download or View Here!
Labels: ကြည့်သင့်တဲအပြာကားများ, မြန်မာ, အာရှ
ဒီတစ်ခေါက် ကားလေးမှာတော့ လီးကြီးကြီးနဲ့ ကောင်လေးချောချော တစ်ပွေနဲ့ တင်ကြီးကြီး ရင်ကြီးကြီး မမတစ်ပွေရယ် ၁၈ - ၁၉ အရွယ်စော်အလန်းလေး တစ်ပွေရယ် ၂-၁ HD လိုးကားလေးပါ။ စော်နှစ်ပွေလုံး ရမ္မက်ကြီးချက် တော်ရုံကောင်တွေဆို ဖြည့်စည်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ။ စော်နှစ်ပွေ လီးဝိုင်းစုပ်ခံရတာနဲ့တင် ပြီးသွားနိုင်တယ်။ အဖုတ်လှလှလေး နှစ်ပေါက်လုံးကို အလှည့်ကျ လျပ်ပေးပြီး စော်နှစ်ပွေကို တလှည့်စီ လိုးပေးတာဗျာ ၃၄မိနစ်စာ အချိန်ရှိပါတယ် အရမ်းအရမ်းကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် လိုးပွဲကြီးမို့ အညှန်းအရှည်ကြီးရေးပြီး အချိန်မဆွဲတော့ဘူးဗျာ ခုဘဲ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါတော့ ကြည့်ရတာ အရသာရှိစေမဲ့ ကားပါ။ စော်နှစ်ပွေကို ကာမအထွတ်အထိတ်ရောက်အောင်
ဘယ်လိုဖြည့်စည်းပေးမလဲ Show လိုက်ပါဦးဗျာ။
Labels: ကြည့်သင့်တဲအပြာကားများ, အင်္ဂလိပ်, အပြာကားတို, အပြာကားရှည်, အမေရိကန်, ဥရောပ
ဂျပန် HD ကားသစ်တွေထဲကမှ ရှယ်ကားလေးတစ်ကား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ စော်လေးက ရုပ်လေးချောသလောက် အပျိုဖြစ်ခါစမှာ တဏှာကြီးပြီး အဖုတ်ဘယ်လောက်တောင် ပွတ်ကစားထားလဲမသိဘူး အဖုတ်ကြီးက သာမာန်စော်တွေထပ်ကို အစေ့ပြူးပြီး ဘေးနှုတ်ခမ်းသားတွေ ပြူးနေတာဘဲဗျာ။ တဏှာကြီးတဲ့ မိန်းမမျိုးမှာသာရှိတဲ့ အဖုတ်မျိုးပေါ့။ နို့လေးတွေကလဲ နို့သီးခေါင်းတွေ တော်တော်ကို ကြီးတာဗျ။ နို့စို့လို့ အကောင်းဆုံး နို့သီးခေါင်းမျိုးပေါ့။ လိုးကားရိုက်တာတောင်မှ ဘဲနှစ်ပွေနဲ့ တပြိုင်တည်း လိုးကားရိုက်ခံတာဗျာ။ စော်ချောချောလေးရဲ့ ရမ္မက်ထန်ပုံတွေ ဘဲနှစ်ပွေရဲ့ အဆွကောင်းပုံတွေ အရင်ကြည့်ရမယ်ဗျာ။ နဂိုက တဏှာကြီးပါတယ်ဆိုမှ အဆွကောင်းတဲ့ ဘဲနှစ်ပွေနဲ့တွေ့တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ပွဲက စည်သွားတာပေါ့ဗျာ။ အဖုတ်ဆွ အဖုတ်လျပ်ကောင်းတွေကလဲ ဆောက်ရမ်းကြည့်ကောင်းသလို စော်လီးစုပ်ခန်းကလဲ ကြည့်ရတာ တော်တော်အရသာရှိတယ်ဗျာ။ ဘဲနှစ်ပွေက အဆွကောင်းသလို အလိုးကလဲ တော်တော်သန်တယ်ဗျ။ စော်ကို အကောင်းကြီး ကောင်းပြီး လူးလိပ်နေအောင် အကွက်မျိုးစုံနဲ့ လိုးသမပေးကြတာဗျာ။ ကြည့်ရတာ တစ်ကားဆိုတစ်ကား သိသိသာသာ တန်တယ်ဗျ။ ရိုက်ချက်တွေက လုံးဝအကြည်အရှင်းဖြစ်တော့ လိုးကွက်တွေ လီးအဝင်အထွက်တွေ အသေးစိပ်ကို အရသာရှိရှိ ကြည့်ရတာဗျာ။ အစကနေ အဆုံး မရစ်ဘဲ ကြည့်ကြည့် တော်တော်အရသာရှိတာဗျ။ ကဲ ကားကောင်းကြည့်ချင်တယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေရင်တော့ ဒီကားလေးကို လက်မလှတ်သင့်ကြောင်း အထူးဘဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီကားလေးမှာတော့ နှစ်ချီလိုးတာ ကြည့်ရမယ်ဗျာ။
ဘဲကြီးကတော့ သုတ်၃ခါထွက်တာပေါ့ အရင်ဦးဆုံးဘဲကို ပါစပ်နဲ့ တချီ သုတ်ထွက်အောင် လုပ်ပေးပြီး လရည်တွေအကုန် သောက်ပြတာဗျာ။ ပြီးတော့မှ နှစ်ချီကုန်းတာ ၃၃မိနစ်စာ အချိန်ရှိပါတယ်။ စော်က တော်တော်လေးကို ရမ္မက်ကြီးတာနော် ကြည့်ကြည့်လိုက် ရမ္မက်ကြီးတဲ့စော်ကို နှစ်ချီ လိုးပြမယ်။ အညှန်းမရေးတော့ဘူးနော် ထုံးစံအတိုင်း ဖိုင်ဆိုဒ်အသေးအကြီး နှစ်မျိုးပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အရမ်းအရမ်းကို မြိုင်ဆိုင်လှတဲ့ လွဲဆော်ပွဲကြီးကို ကြည့်ရပါမယ်။
ကြည့်ရတာ တကယ်ကိုအရသာရှိစေမဲ့ ဂျပန်ကားကောင်းလေး လာပါပြီဗျာ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဂျပန်မလေးကို ကာမအထွတ်အထိတ်ရောက်အောင် ဆွပေးပြီး ရှယ်လိုးပြမှာဗျာ။ ကြည့်ဖူးသမျကားတွေထဲမှာ စော်အဖုတ်က လီးမထည့်ရသေးဘဲ မိန်းမ သုတ်ထွက်တာဆိုလို့ ဒီတစ်ကားဘဲ ရှိသေးတယ်ဗျာ။ နှိပ်စက်ပြီး လိုးလို့ မဟုတ်ဘူးနော် စော်ကို တကယ်ကို ကောင်းအောင် ကလိပေးလို့ စော်အဖုတ်က အရည်တွေ ပန်းထွက်ပြီးအနောက်က သုတ်ရည်တွေပါ ထွက်လာတာ မိန်းမတစ်ယောက် သုတ်ရည်ထွက်ပြီး ပြီးတယ်ဆိုတာ တော်တော်ကို ရှားတာနော် ဒီကားလေးက ရှင်းတယ် လုံးဝကို ဘဲကြီးလီး မထုတ်ရသေးဘဲ စော်ကို ကလိပေးတုန်းဘဲ ရှိသေးတယ် စော်ပြီးသွားတယ် ပြီးတာမှ သုတ်ရည်ပါ ထွက်အောင်ပြီးသွားတာ။ စော်လေးက သူမကာမအထွတ်အထိတ် တကယ်ကိုရောက်သွားတော့ ဘဲကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပြီး လီးတန်ကြီးကို ကြင်ကြင်နာနာလေး စုပ်ပေးတာဗျာ။ သုတ်ရည်ထွက်အောင်ကို အပြီးကြမ်းတဲ့ စော်လေးဆိုတော့ လိုးခန်းတွေမှာ ဘယ်လောက်တောင် ကြည့်ကောင်းလိုက်မယ်လို့ ထင်လဲ စကားလုံးနဲ့တောင် ဖော်ပြရခက်တယ်ဗျာ။ အရမ်းအရမ်းကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကားလေးမို့ လက်မလှတန်းကြည့်လိုက်ပါဦး စော်သုတ်ထွက်ပြီး ပြီးတာ ကြည့်ရခဲတယ်နော် အညှန်းကို အရှည်ကြီး မရေးတော့ဘူး နောက်မရေးတတ်ရင် မကောင်းဘူး ထင်သွားမှာစိုးလို့